2 Beresosɛm 3 | Intanɛt so Bible | Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Beresosɛm 3:1-17
3 Na Solomon fii ase sii Yehowa fie+ no wɔ Yerusalem, Bepɔw Moria+ so, faako a Yehowa yii ne ho adi kyerɛɛ ne papa Dawid,+ beae a Dawid siesiei wɔ Yebusini Ornan awiporowbea+ hɔ no. 2 Ofii ase sii ofie no n’ahenni afe a ɛto so anan mu, ɔsram a ɛto so abien no da a ɛto so abien no.+ 3 Eyi ne fapem a Solomon to maa nokware Nyankopɔn fie no: Sɛnea kan na wosusuw nneɛma no, ne ntwemu yɛ basafa aduosia, na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa aduonu.+ 4 Abantenten+ a ɛwɔ ofie no anim no, ne ntwemu yɛ basafa aduonu, na ne tenten yɛ basafa ɔha aduonu; ɔde sika amapa duraa emu nyinaa. 5 Na ɔdan kɛse+ no, ɔde ɔpopaw nnua sɛm mu na ɔde sika pa+ duraa ho; afei nso oyiyii mmedua+ ne ntweaban+ nsamaa wɔ so. 6 Bio nso, ɔde aboɔden abo duraa ofie no ho ma ɛyɛɛ fɛ;+ ná sika+ no fi sika kurom. 7 Ɔde sika+ duraa ofie no ne ne mpuran ne n’abobow ano, ne n’afasu ne n’apon ho, na oyiyii kerubim nsamaa wɔ afasu no ho.+ 8 Ɔyɛɛ Kronkron mu Kronkronbea+ no nso; ne ntwemu ne ofie no tɛtrɛtɛ yɛ pɛ: basafa aduonu, na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa aduonu.+ Ɔde sika pa a ne dodow si dwetikɛse ahansia na eduraa mu. 9 Nnadewa+ no mu duru yɛ sika nnwetɛbona aduonum; ɔde sika duraa abansoro adan no nso ho. 10 Ɛnna osen kerubim abien+ sisii Kronkron mu Kronkronbea dan no mu, na ɔde sika duraa ho.+ 11 Na kerubim no, wɔn ntaban+ tenten yɛ basafa aduonu; ntaban no biako tenten yɛ basafa anum, na ɛka ɔdan no fasu; ntaban no biako nso tenten yɛ basafa anum, na ɛka kerubim biako no ntaban.+ 12 Kerubim biako no nso ntaban tenten yɛ basafa anum, na ɛka ɔdan no fasu; ntaban no biako nso tenten yɛ basafa anum, na ɛka kerubim biako no ntaban.+ 13 Kerubim no ntaban a wɔatrɛw mu no tenten yɛ basafa aduonu; wogyinagyina wɔn nan so, na wɔn anim kyerɛ ɔdan kɛse no. 14 Afei nso ɔde ahama bruu+ ne nea ɛbere dum, tankɔkɔɔ ne nwera pa yɛɛ ntwamutam+ na ɔnwenee kerubim wɔ mu.+ 15 Afei ɔyɛɛ adum+ abien wɔ asɔrefie no anim; ne tenten yɛ basafa aduasa anum, na ntaaso+ a ɛwɔ emu biara so no tenten yɛ basafa anum. 16 Ɛnna ɔyeyɛɛ kɔnmuade ntweaban+ de totoo adum no so, na ɔyeyɛɛ biribi te sɛ granate akutu+ ɔha de guu ntweaban no so. 17 Na ɔde adum no sisii asɔredan no anim; biako si nifa na biako nso si benkum, na ɔfrɛɛ nifa de no Yakin, na ɔfrɛɛ benkum de no Boas.+